Jaarmiyaalee diinagdee addunyaa fi Itiyoophiyaa - 'Pizaa Haat' - BBC News Afaan Oromoo
Waliigaltee jaarmiyaa guddicha Ameerikaa 'Yaam biraandis' fi Jaarmiyaa Itiyoophiyaa 'Balaay aab fuuds' giddutti godhameen Piizaa Haat dameesaa Finfinneetti baneera.
Dhuma torbee kanaarrattis damee dabalataa tokko akka banu ni eegama.Waggooti lamaaan dhufan keessatti immoo bakka addaaaddaatti banuun 10 (dameeleesaanii 10) akkaa geessisan himaniiru.
Waliigalteen kuni qarshiin miliyoonni 35 kan itti baheefi dameewwan isaa lamaanitti hojjeettoota 55 kan hammate dha. Itiyoophiyaan biyyoota Sahaaraan gadi jiran keessaa damee 12ffaa dha.
Ogeessi qor dinagdee Abdulmannaan Mahammad akka jedhanitti Piizaa Haatiin gara Itiyoophiyaa dhufuun humni waa bituu namoota biyya kanaa dabaluu agarsiisa.'Jaarmileen beekamoo addunyaaleessaa gara Itiyoophiyaa dhufun isaanii jaarmilee diinagdee biroo ni jajjabeessa' jechuun ibsaniiru
Gatiin Piizaa tokkoo birrii 90 hanga 350 kan ta'uufi oomishaalee nyaataa Piizaa kana qopheessuuf oolan guutummman biyya alaarraa akka galchuu Pizaa Haat beeksissera.
Jaarmiyaan kun oomishaalee dheedhii biyyaa alaa galchuunsaa lammiilee oomisha kana dhiyeessuu danada'an hin miidhuu jennee gaaffii gaafanneef,ogeessichi'Jaarmiyaaleen kan akka Piizaa Haat qulqullina oomisha isaaniif baayyee eeggatu. Kanaafis oomisha nyaaticha ittiin hojjetan iddoo tokkoo qofa kan isaan fichisiisan kanammoo gatii taajaajilaa kaffalachisuun bu'aa irraa argatu.
Jaarmiyaan kuni kan milkaa'u yoo oomisha isaa gatii madaalawaan yoo dhiyeesse qofa jechuun eeru.
'Torbanitti pizaawwan 2200 gurguruuf kan karoorse Piizaa Haat,gatiin ammaa kuni xiqqoo mi'aawaa otoo hin tahiin hin hafu jechuun ogeessi qor-dinagdee kun dubbatu.
'Gatiinsaa kan biyyoota biiroo wajjin walfakkaataadha, Itoophiyaa keessatti doolaara 3-12 gurguruufi kan isaan yaadani. Gatiin inni guddaan birrii 350 dha kuni immoo hawaasa galii guddaa qabuuf qofa kan ta'u dha,' jechuunis ibsu.
Teessoon Piizaa Haat Keentaakii yoo ta'u, Afrikaa keessatti piizaawwan kuma tokkoo ol maqaa isaatiin gurguramu. Jaarmiyaan kun dameelee eeyyama qaban 188 ardii kana keessatti qaba.